एनआईसी एशिया बैंकले २० % लाभांश मंसिर २१ गते पारित गर्ने
कात्तिक २७, काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले मंसिर २१ गते २३ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ ।
कम्पनीले रजिष्टर्ड कार्यालय थापाथली, काठमाडौंमा विहान ९ बजे सभा बोलाएको हो । कम्पनीले यो वर्ष २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
कम्पनीको असोज ४ गते सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को लागि १९ प्रतिशत बोनस शेयर र १ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावसहित गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पारित चालू आवको लागि लेखापरिक्षक नियुक्ती लगायतका विषय सभाले पारित गर्नेछ ।
सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले मंसिर १० गतेदेखि बुक क्लोज गर्ने भएको छ । बुक क्लोजको आधारमा मंसिर ९ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरुले प्रस्तावित लाभांश प्राप्त गर्नेछन् ।
हाल उक्त कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ९ अर्ब ७१ करोड ७६ लाख ५१ हजार रहेको छ । सोहि पूँजीको आधारमा कम्पनीले २० प्रतिशत लाभांश दिन लागेको हो ।
गत वर्ष १० प्रतिशत बोनस शेयर कर प्रयोजनसमेत ११ दशमलव शून्य ५३ प्रतिशत नगद लाभांश दिएको उक्त कम्पनीले यो वर्ष बोनस शेयरमा जोड दिएको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम्पनीको लाभांश १ दशमलव शून्य ५३ प्रतिशतले घटेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म उक्त कम्पनीले रू. ३ अर्ब १२ करोड १४ लाख ८७ हजार खुद नाफा गरेको थियो । त्यस अवधिसम्म कम्पनीको वितरणयोग्य नाफा रू. १ अर्ब ४४ करोड ७ लाख ३४ हजार थियो । कम्पनीले कुल रू. १ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख बराबरको लाभांश यो वर्ष वितरण गर्न लागेको हो ।